घरेलू र इलेक्ट्रोनिक उपकरण, भयंकर प्रतियोगिता द्वारा संचालित को निर्माता, हामीलाई नयाँ प्रविधिहरू र मोडेल, की र तिनीहरूलाई तेजी लागू प्रस्ताव। हालै पारंपरिक एलसीडी टीभी र एलईडी backlight संग लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले उपकरणहरू, र अब बीच प्रतियोगिता भयो सम्म बजार प्रविधिको घरमा 3D छवि प्ले हुनेछ भरिएको थियो। 3D टीवी मात्र 2010 मा CES र IFA को प्रदर्शनी हल मा देखा छन्, र तुरुन्तै धेरै चिरपरिचित कम्पनीहरु को आफ्नो औद्योगिक उत्पादन उठाए।
3 डी निष्क्रिय र सक्रिय चश्मा संग टेलिभिजन
निष्क्रिय र सक्रिय प्रणाली, तीन-आयामी टेलिभिजन को प्रविधि विकास, संसारका नेताहरूले ग्राहकका लागि लडाई र यसको बजार आला मा वृद्धि को लागि एक वास्तविक दौड गरे। सोनी, सैमसंग र पानासोनिक द्वारा विकल्प - निष्क्रिय 3D प्रविधि साइकल, एलजी आफ्नो उत्पादन र Vizio, सक्रिय विकल्प जारी। दुवै प्रविधिहरू फाइदा र बेफाइदा छन्।
त्यसैले, निष्क्रिय चश्मा संग3डी टीवी एक त्रिविम प्रभाव सिर्जना गर्नुहोस्, तर यो मामला मा चित्र नीरस छ र फिक्का र रंग जानकारी केही हराएको छ। संग सही लेंस लकीर खींचने निर्मित चिप नियन्त्रण सक्रिय स्टेरियो चश्मा। सक्रिय चश्मा लागू 3D प्रभाव लागि प्रयोग बुझे इन्फ्रारेड टिभी स्क्रिनमा पुनरुत्पादन छवि वायरलेस समिकरण सर्किट। थप जीवन्त र उच्च गुणस्तर प्राप्त सक्रिय चश्मा मा तस्बिर।
तर स्पष्ट अभियोजन जोगिन गर्न सैमसंग सहित कम्पनी निर्माता, 3D चश्मा प्रयोग गर्ने सम्भावित परिणाम मा अध्ययन को परिणाम प्रकाशित गरेका छन्। तिनीहरूले मानव स्वास्थ्य गर्न 3D चश्मा हानि सेट गर्नुहोस्। उल्लिखित साइड इफेक्ट बीच चक्कर आना, वाकवाकी, disorientation, convulsions, दृष्टि परिवर्तन, बेहोशी र मांसपेशी ऐंठन। यी कारणहरूले गर्दा,3डी चित्र संग हेर्दै चलचित्र बच्चाहरु, वृद्ध र गर्भवती महिलाका लागि सिफारिस गरिएको छैन।
चश्मा बिना 3D टिभी
3D प्रविधिको विकास मा तार्किक अर्को चरण - हामी खातामा धेरै उपभोक्ताहरु चश्मा बिना कार्यक्रम र चलचित्र, 3D टिभी हेर्न चश्मा प्रयोग स्वागत छैन भन्ने तथ्यलाई लिन भने। CES 2011 मा सोनी, Toshiba र एलजी आफ्नो मोडेल, प्राविधिक समाधान को आगंतुकों तस्बिरहरू गुणस्तर र originality द्वारा चकित शुरू।
अघिल्लो मोडेल देखि चश्मा बिना फरक 3D टिभी के हो? आपसमा धेरै नजिक स्थित दुई विस्थापित तस्बिरहरू सिद्धान्त उपयोग। हाम्रो मस्तिष्क र आँखा केही धेरै के गर्न गहिराई को गठन को लागि। प्लेब्याक सम्भव छ जो मा प्यानल, हुनुपर्छ संकल्प, भन्दा सामान्य पूर्ण HD धेरै उच्च, अर्थात्, 1080 (1920 x 1080)। तिनीहरूले4हजार टीवी भनिन्छ।
प्यानल नै समय मा केहि फरक कोण बाट लिएको दुई फ्रेम, प्रसारित छन्। विशेष फिल्टर दुई तस्बिरहरू अलग र दृश्य को बल्लतल्ल फरक अंक प्रदर्शित गर्दछ। दर्शकहरूलाई नजर 3D प्रभाव को गठन गराउँछ कि केही तस्बिरहरू बुझ्ने। यस मामला मा, तातो स्थान तपाईंको आँखा बदलता गर्दा, मात्रा प्रभाव भाँचिएको छ, र मान्छे एक गुणा वस्तुहरु वा 3D छविको किनाराको पूरै गायब हुनेछ मा arising Crosstalk महसुस हुनेछ। गर्न चश्मा बिना 3D टिभी काम गर्न, तपाईं 3D स्क्रिनबाट निर्दिष्ट दूरी मा एक निश्चित क्षेत्र हुनुपर्छ।
माइक्रोसफ्ट र अन्य चिरपरिचित कम्पनीहरु सक्रिय टिभि क्यामेरा र अनुहार पहिचान वा आँखा आन्दोलन ट्रयाक गर्न सक्ने एउटा सिस्टम मा माउन्ट स्क्रिनको शीर्ष मा गतिशील फिल्टर संयोजन कि प्रविधिहरू विकास गर्न खोज्दै हुनुहुन्छ। चश्मा बिना यस्तो स्मार्ट 3D टिभी निरन्तर दर्शकहरु को pupils को वर्तमान स्थिति, त्यसैले मीठो स्थान आफ्नो आँखा को दृष्टि मा आयोजित छ अन्तर्गत फिल्टर समायोजित हुन्छ। मिति, लागू विज्ञान को एक भाग, माईक्रोसफ्ट पहिले नै साथ चार प्रयोगकर्ता तिनीहरूलाई "चश्मा-मुक्त» 3D टिभीमा प्रदर्शन गरेर निगरानी गर्न सक्छन् कि एक प्रोटोटाइप 3D प्रदर्शन छ। यस्तै प्रविधि उपलब्ध छ र निन्टेन्डो, यो पोर्टेबल 3DS गेमिङ उपकरणहरू मा आवेदन प्राप्त गरेको छ।
कम्पनीहरु र 3D टिभी प्रतिज्ञा नयाँ तरिका को आविष्कार मा फलदायी काम सक्रिय प्रतिद्वंद्विता, चाँडै बजार गुणस्तर, सस्ती मूल्यहरु मा कमीकमजोरी उत्पादनहरु बिना भर्न हुनेछ। को volumetric छवि च्यानल संग एक वेबकास्ट आधुनिक, तेजी विकास संसारमा मात्र expedient हुनेछ।
जो एक लामो समय को लागि सेवा गर्न, उपकरण किन्न राम्रो छ
वायरलेस हेडफोन बीट्स: विनिर्देशों, समीक्षा
ट्याब्लेट गर्न किबोर्ड कसरी जडान गर्न? चरण पुस्तिका द्वारा चरण
अलार्म Starline - उत्तम को सर्वश्रेष्ठ
के "Maynkraft" बारेमा थप जान्न
Sasha Cherny, "को काकेशस को कैदी"। सारांश कथा
रहस्य "शिकारी सहन", वा कसरी एक प्रमुख बिना ढोका खोल्न
पूर्व बिरुद्ध पश्चिम: नयाँ ब्रुस ली को खोज मा